China ibhokisi emnyama yebhokisi yeplyo mveliso kunye nabathengisi | Ukuqhayisa
Ibhokisi yeplyo emnyama emnyama
Injongo eyakhelwe i-Plyometric Exercise. I-Wood Plyo Box inezinto ezi-3 ezahlukeneyo zokuphakama ekukhetheni uqeqesho: inokusetyenziswa kubude be-20, 24, kunye ne-30 yeemitha ukuphakama. Ukuphuhlisa amandla ngoqeqesho lwakho lokutsiba, ukudipha, ukunyathela, kunye nokunyuka kwebhokisi.
Yintoni esenza sahluke? Imingxunya ebunjiweyo yangaphambi kokungena nzulu ukuze ungakwazi ukuzibamba kwisikrufu. Iikona zeradiyo ezijikeleziweyo kunye nemiphezulu egudileyo ukunqanda iziqwenga. Izibambo ezinkulu zokuphatha ezenzelwe ukuthathwa kulo naliphi na icala.
Yenzelwe ukuKhangela inkqubela phambili yakho. Nge-3 kwi-1 Plyo Box, unokuhlengahlengisa ubude bakho njengoko usonyusa amandla akho oqeqesho. Qeqesha kanzima kwaye rhoqo kangangoko unako.
Iyahlala kwaye yomelele. Ibhokisi yePlyo yenziwe ngamaplanga aphezulu. Ukudibana kunye njengephazili, ubukhulu bethu obukhulu bunokuqiniswa ngaphakathi.
Ukuphakama okungafaniyo kukwathetha iindlela zoqeqesho eziguquguqukayo! Yenza umthambo wokutsiba, idiphu, ukunyathela, kunye nokunyuka kwebhokisi njengoko usebenza kumandla akho kunye nokuguquguquka.
Ifumaneka ngeplywood esemgangathweni, okanye i-nonslip, ubukhulu obukhulu
Incinci: 16 x 14 x 12 intshi
Phakathi: 20 x 18 x 16 intshi
Enkulu: 24 x 20 x 16 intshi
I-X-Enkulu: 30x 24 x 20 intshi
Zithembe xa usenza ...
Amanyathelo okonyusa ubunzima
Ibhokisi ephindaphindwayo iyaxhuma
Ukucoca okuphakanyisiweyo okanye i-rack
Ukugqwesa kuluhlu olubanzi lokusetyenziswa
Iijimi zasekhaya zangaphakathi
Slip ukutyabeka okunganyangekiyo kuwo omathandathu amacala
Le plyobox yakhiwe ngeplywood yomeleleyo e-3/4 intshi esetyenziselwa ukwakha i-Original Fitness Gear Wood Plyoboxes, kodwa yambathiswe ngombala wangaphandle. Oku kukunceda ukunciphisa i-plyobox ekutyibilikiseni umphezulu okanye iinyawo zakho ekutyibilikeni ngaphezulu kwebhokisi.
Sizimisele ukubonelela ngeeseshoni zoqeqesho ezikhuselekileyo nezisebenzayo ngaphandle kwezixhobo zokuzilolonga ezinzima kunye nezinzima. Kungenxa yeso sizathu le nto iBhola yePlastiki yeFlexible Plyo icompact ngokwaneleyo ukulungiselela umthambo wasekhaya nowegaraji. Mane uyitshintshele kubude obufunayo kwaye uqale uqeqesho!
Egqithileyo I-3 kwibhokisi enye ye-Wood Plyo yokutsiba
Okulandelayo: Iibhloko zeJerk
Ibhokisi yePlyo yePovu
Ibhokisi yePlyo ethambileyo
Ibhokisi eyomeleleyo yePlyo Plyo
Iplanga yePlyo Box
I-3 kwibhokisi enye ye-Wood Plyo yokutsiba
I-EVA Jerk iibhloko